Kooxda Barcelona oo dib u dhigtay tababarkeeda kaddib markii labo ka mid ah laga helay Korona Fayras – Gool FM
(Barcelona) 05 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa joojisay tababarkii ay u balansanaayeen Talaadada maanta, iyagoo taxadar muujinaya kaddib markii labo xubnood oo ka mid ah shaqaalihii ugu horreeyay ee kooxda laga helay Korona Fayras.
Kooxda Tababare Ronald Koeman ayay ahayd inay isku diyaariyaan kulankooda La Liga ee ay Athletic Club Arbacada kula ciyaarayaan garoonka San Mamés. Kooxda reer Catalan ayaa ku wargalisay maamulka isboortiga iyo caafimaadka kaddib natiijadii baaritaanka ee Isniintii.
Bayaan ka soo baxay kooxda ayaa lagu yiri: “Dhamaan kooxdu waxay mari doonaan baaritaan dheeri ah ee PCR subaxnimada Talaadada waqtiga maxalliga ah iyadoo la waafajinayo nidaamka La Liga, sidaas darteed tababarkii la qorsheeyay berri oo Talaado ah 11.00am CET ayaa dib loo dhigay, waqtiga cusub ee tababarka iyo Shirka jaraa’id ee xiga ee ka horreeya kulanka Athletic Club v FC Barcelona ayaa lagu dhawaaqi doonaa Talaadada [Maanta].”
Macallin Koeman kooxda uu hoggaamiyo ayaa fadhisa kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga waxaana ay u safrayaan Bilbao halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan Athletic kuwaasoo fadhiya kaalinta sagaalaad.